» साढे दुई अर्बको घोटाला प्रकरणमा मुछिए ! डा.युबराज खतिवडा,आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस साढे दुई अर्बको घोटाला प्रकरणमा मुछिए ! डा.युबराज खतिवडा,आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस – हाम्रो खबर
साढे दुई अर्बको घोटाला प्रकरणमा मुछिए ! डा.युबराज खतिवडा,आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस
काठमाडौं ।अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा साढे दुई अर्ब अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका छन् । यससम्बन्धमा संसदीय समितिको सुनुवाईमा उजुरी परेपनि त्यसबारे छलफल नै नगरी उनलाई अनुमोदनको चलखेल भइरहेको खुलेको छ । त्यसबारे उजुरीकर्ताहरुलाई समितिले बाइपास गरेको खुलेको छ । समितिले उजुरीकर्ताहरु सम्पर्कमा नआएको भन्दै उजुरी उपर छलफल नै नगरी २७ गतेको लागि खतिवडाको संसदीय सुनुवाई तय गरिएको छ । तर, आफुहरुलाई सम्पर्क नै नगरिएको उजुरीकर्ताहरुले बताएका छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा डा.खतिवडाविरुद्ध ३ वटा उजुरी परेको थियो । जसमध्ये एउटा उनी गभर्नर हुँदा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको घोटालामा मिलेको आरोपसहित उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । केही महिनाअघि राष्ट्र बैंकले सबै अवस्था राम्रो भनेर रिपोर्ट बनाएर बोनस समेत स्वीकृत गरेको र लगत्तै संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
सस्थाको अनियमिततामा त्यतीबेला राष्ट्र बैंककै मिलेमतो रहेको र छानबिनको क्रममा नाइकेहरुलाई उन्मुक्ति दिएको तथा नक्कली ऋणीहरुलाई फसाएको भन्दै संसदीइ समितिमा उजुरी परेको थियो । सो प्रकरणमा धितोबाट कर्जा असुली हुने अवस्था भएपनि धितो लिलामी प्रक्रिया नै रोकेर नक्कली ऋणीलाई फसाइएको आरोप खतिवडामाथि छ ।
संसदीय सुनुवाईको क्रममा उजुरीकर्तासँग छलफल हुने गर्दछ । तर,आफुहरुलाई सम्पर्क नै नगरी उजुरीकर्ताहरु सम्पर्कमा नआएको समाचार पढ्दा अचम्म लागेको विकास उजुरीकर्ता कार्कीले बताए । उनले समितिका सांसदहरुलाई भेटेर बुधबार यसबारे गुनासो गरेका छन् ।
सो ठगीप्रकरणमा मुख्य योजनाकार शम्भु केसी जेल बसेर छुटिसकेका छन् भने उनका ज्वाई पवन कार्की अमेरिकामा छन् । कार्कीविरुद्ध इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरेपनि उनलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याउन सकेको छैन ।
डा खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा बिशाल ग्रुपलाई नीतिगत रुपमा सहयोग गरेर अनियमितता गरेको आरोप समेत लागेको छ । दृष्टि न्युजबाट साभार